Hiragasy – Hifandona ny samy avy any Fenoarivo - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Hiragasy – Hifandona ny samy avy any Fenoarivo
Miditra amin’ny herinandro fahadimy. Hiverina etsy amin’ny Lapan’ny tanàna etsy Analakely indray ny fifaninanana «hiragasy makotrokotroka», izay karakarain’ny Haygasy sy ny tanànan’Antananarivo ary ny ofisim-paritry ny fizahantany eto Analamanga (ORTANA). Hifandona etsy Analakely amin’ny fandaharam-potoana rahampitso manomboka amin’ny 2 ora tolakandro ny tarika roa samy avy any Fenoarivo. An-daniny ny tarik’i Betsinjaka Rakotosolofo ary ny tarika Raveloson kosa an-kilany.
Toy ireo tarika efa nifandimby teo aloha, dia samy hanezaka hamoaka ny heviny sy hiaro izany amin’ny fomba rehetra ny tarika tsirairay ary tsy hanaiky lembenana sy ho resy an-kabary ihany koa. Samy hitsarana ireo mpandray anjara avokoa na ny votoatin’ny kabary sy ny hira ary ny zanan-kira, ny fomba fitafy sy ny dihy…
Hiragasy, Mpanoratra Rijakely, 18.08.2012, 08:31	FIARAHAMONINA